Ingubo yefestile, ekwindla-ebusika 2015-2016, ifoto. IiNkwenkwe zaBafazi: Iintlobo zeMfashini
Iingu-TOP-10 zeengubo zembatho zekwindla nobusika 2015
Kule ngxenye yesicatshulwa sefestile siza kuthetha ngeengubo. Siyabulela imozulu yethu, siyithwala ixesha elininzi lonyaka. Ukuze ungagxinwa ngokungafani, zithengise imodeli eyahlukeneyo. Isayithi leStylist yenza ukhetho lweengubo eziphathekayo ekwindla nakubusika 2015-2016 kwiindidi zamanani ahlukeneyo.
Kwimozulu yokuqala yokubanda - i-ZARA, u-5 999
Okwenene kweli xesha liza kuba yingubo emfutshane kunye neengubo ezinamathathu, ngaphezulu ubude bufana nebhokethi. Kulo benzi beemodeli basebenzise ezininzi iimpahla eziphathekayo-iipokethi ezinkulu kunye ne-hood. Akukho nto engabonakaliyo, ukulula kunye nokucaca kwemigca. Unokuwugqoka njengesiqingatha sokuqala ekwindla ngesambatho esinesigqoko, kwaye ngexesha lokubanda - ngee jeans kunye neebhulukhwe.
Ifom yefowuni i-ASOS, kwi-discount ye-77, i-42 € (inani lokuqala li-110, i-60 €)
Kwakhona, iikholeji ezibanzi kunye neepakethi zazingena kwiintliziyo zabaqulunqi. Umgca okhulayo wamagxa alo mbatho, ubuninzi obuninzi bendoda, yenza umfanekiso wesibhakabhaka unqabile. Umbala we-fuchsia uhambelana nesakhelo seengqungquthela eziphathekayo zekwindla ezayo, ezithembisa ukukhanya.
Ukutshatyalaliswa ngokufudumele - Ukuhlambalaza, kwisaphulelo se-ruble 1 999 (intengo yasekuqaleni - i-ruble 4 998)
Ndiyabulela umzekelo kwinqanawa elikhulu lokuwa, uya kujonga ngesiNgesi. Iingubo zokugqwesa kwindlela yokugqithisa i-oversice zigqityiwe iminyaka emininzi, kodwa yinto yokukhwela kwikhola enkulu kunye nomgca wegxala elingaphantsi kwento eyenza le nto ibonakale kule nyaka.
Iipilesi zeParadesi - i-Oodji, i-rubriki ye-9 999
Ukholo olunesibindi kwi-cage lukhutshwe ngeentyantyambo, iintaka, iintlanga kunye ne-cosmic motifs. Umgaqo oyintloko wendlela yokwindla yokwindla ka-2015 ngumbala ongaphezulu. Ukuwa oku, gxininisa kumzekelo oqaqambileyo. Njengekhetho, qwalasela le ngubo yombala obomvu ngeentyantyambo ezinkulu, khumbuza uPetrikovskaya ukudweba.
Ngomtya wesineke - Heine, 139, 90 €
Imfashini iya kubuyela emkhosini. Iipekethi zePea kunye neengubo zokugqoka zithathe indawo yengubo enhle kunye necocekileyo. Lo mzekelo uyaphawuleka kuloo nto, ukubandakanya iimpawu zezempi zamacandelo, ezigcinwa ngumfazi: iifom zensimbi, i-collar stand kunye namagxa ehlombe emagxeni angeke akwenze ijoni, kodwa iya kukhangela ngokukhawuleza ekukhangeleni kwakho. Ubuluhlaza obomvu ngumbala weklastiki wengubo, kuya kuhlale kuphazamiseka.
I-Leopard yabafazi abanesibindi - iMango, i-$ 149.90
I-Leopard yawa phantsi! Phakathi kwazo zonke iinguqulelo zokuprinta kwezilwanyana kwiinkokheli nguye - i-lengwe ekhawulezileyo, esendle, eqaqambileyo. Ingubo enxibekileyo yokunqunyulwa kweklasi iya kufana neentombazana ezinomzimba.
Kwinqanaba legusha elikhukhulayo-Inzuzo, kwisaphulelo sama-ruble angama-9 999 (intengo yasekuqaleni - i-ruble 4 399)
I-Fur - imbonakalo engabonakaliyo yengubo yangaphandle yexesha lokubanda. Ingubo ekupheleni kuka-2015 ingaba ngumlilo opheleleyo okanye ihlanjwe ngoboya. Kwimeko yethu, iibhloko zangasemva kunye neengxande ezisebukhosini zenziwe nge-scrawl.
Ukutshitshiswa ukutyhila - UTERQÜE, i-rubriki engu-85 990
Isitayela se "patchwork" satshintshile ama-catwalks athobileyo kwiqoqo lekwindla-ebusika ngo-20015-2016. Ukutshitshiswa ukutyhila - ngoko sifumana iingubo zefashini ekwindla ekwindla. Ngombala, iinqaba zobomi kufuneka zihluke kwaye zimelele ngqo kwimvelaphi yomnye.
I-Fur boas - MEXX, 10 299 ibhaqa
Kwiminyaka eyikhulu edlulileyo, iimpahla zangaphantsi zabesifazane zazingenakulungiswa ngeebhosi okanye kwiikholeji zoboya. Sinikeza izifundo kwiindawokazi ezihloniphekileyo zobugcisa kunye nesitayela. Ikhola eyenziwe ngobumnandi obushenxisayo isuswe, into eyenzileyo, enikwe i-vagaries yezulu ekwindla kunye nemvula yamanzi ngeli xesha lonyaka. Isitayela esifanelekileyo ngebhanti yokunquma sisigxininisa isibalo, kunye nemirhumo ebomvu ebomvu kunye ne-vivacity kunye nesimo esihle sengqondo.
Ubume be-Ascetic, izinto eziphathekayo - uElie Tahari, i-$ 898.00
Ubume beengubo ezinokuthiwa yi-boring, ukuba kungabikho iibhloko ezingenanto eziqhelekileyo, ezifana nomnye. I-Fur yenza into eyakhayo, kwaye inhlanganisela ephumelelayo yembala-igrey kunye nomnyama-ngempumelelo ikhupha ukukhanya koboya.
Izambatho zesiTaliyane eziMpawu
Indlela yokukhetha isitala sakho seengubo?
Isikhokelo sefestile kwengubo yabesifazane
Iphepha elimhlophe: indawo yokuthenga, indlela yokugqoka, kunye nento yokudibanisa
Izinto ezili-10 ezingahambi ngefashoni
I-Pizza kunye nama-mushroom e-portobello, ipilisi entle kunye nebhokhwe
I-Sauna, ibhafu, ukuhlalisa eMoscow
Hlakulela ngokuchanekileyo iintsuku
Buyisela umbala emva kokukhulelwa
Isondlo esifanelekileyo somntwana kwiminyaka emi-2
Icandelo le-Caesarea: ubuchule kunye neengxaki
Ngaphandle kwama-parabens, nothando ezinyaweni: ukuvuselela i-serum esuka eWella
Indlela yokwenza iingubo zeHalloween ngezandla zakho: imiyalelo yesithombe kunye nevidiyo
Ukuxothwa emsebenzini ngoxolo
Yintoni iHymmone's hormone kwaye yintoni echaphazelayo?
Iintlobo zama-bangs: khetha ngokuchanekileyo
Iiminqweno ezilishumi ezinqwenelekayo: iqoqo lamascots Amulette de Cartier